Teknolojian’ny serasera : hisy “annuaire” ho an’ireo matihanina | NewsMada
Teknolojian’ny serasera : hisy “annuaire” ho an’ireo matihanina
Nanentana ireo orinasa, fikambanana sy sampana isan-tsokajiny izay miasa amin’ny sehatry ny teknolojian’ny ita sy ny serasera ny minisiteran’ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny teknolojia vaovao. Ho fanamafisana hatrany ny fifandraisana eo amin’ny minisitera sy ny sehatra tsy miankina no antony, ankoatra ny fanohanana ireo mpampiasa vola amin’ny indostria niomerika. Araka izany, nanentana ny handefasana ny mombamomba ireo orinasa rehetra, mba hahafahana mamolavola “annuaire”, na firaiketana ireo matihanina rehetra eo amin’ny sehatry ny teknolojian’ny serasera ny minisitea.
“Tian’ny minisitera hatambatra avy eo havoaka ao amin’ny tranonkalany ny mombamomba ireo matihanina rehetra eo amin’ny indostrian’ny teknolojian’ny ita sy ny serasera. Ho an’ireo orinasa sy fikambanana efa miasa na ireo vao manam-pikasana ny hiditra amin’ny sehatra izy ity. Fitaovana iray hanamorana ny fifandraisana eo amin’ny samy matihanina sy eo amin’ny mpampiasa ny teknolojian’ny serasera rehetra izany”, hoy ny nambaran’ny tale jeneralin’ny teknolojia vaovoa eo anivon’ny minisitera, Ravel José.
Tsy natao hahafantarana ireo matihanina fotsiny, fa indrindra hitiliana ireo asa vaovao avy amin’ny fampiasana ny teknolojian’ny ita sy ny serasera ny “annuaire”, izay efa miasa amin’ity volana janoary ity. Ao amin’ny tranonkalan’ny minisitera (www.mptnt.gov.mg), aloha amin’ny voalohany no ahitana ny firaiketana. Ho azo jerena amin’ny “spartphone” kosa izany, aoriana kely.